Daandiin Baahirdaar irraa Finfinnee geessu baname - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Kush Media Network
Daandiin Baahirdaar irraa gara Finfinnee geessu Jimaata A.L.I Fulbaana 30, 2012 ganama saatii 5 irraa eegalee magaalaa Gohaa Tsiyoonitti cufamee ture, kaleessa Sanbata galgala saatii 12 irraa eegalee banamuu aanga'ooti naannichaafi imaltoonni BBCtti himaniiru.
Hogganaan bulchiinsafi nageenya Godina Dajan Obbo Kaasaahuun Asfaaw "Jalqabumaan sababi daandichi ittiin cufamee sirrii hin turre. Sababi daanditti itti cufamees ta'e baname kan nutti himame hin jiru," jechuun BBCtti himaniiru.
"Namoota Oromiyaarra jiran biratti yeroo bilbillu daandiin banaadha nuun jedhu, yeroo konkolaataa erginu garuu deebi'anii dhufu" jechuun Obbo Kaasaahuun haala ture ibsu.
Magaalaa Gondar irraa kaate Tigist Dassee daandiin baname gara Finfinnee imalaa akka jirtu BBCtti himteetti.
Daandiin Bahirdaarii Finfinnee geessu amallee cufaadha
Harargee Lixaa Bordoddeetti namoonni 7 ajjeefaman
Sanbata kaleessa Tigist yemmuu BBCtti dubbattu Jimaata daandiin cufamee akka tureefi konkolaatonni hedduun dhaabbatanii arguu ishee himteetti.
"Har'a ganama [Dilbata] Dajan irraa kaanee gara Finfinnee imalaa jirra. Ammaa naannoo Fichee geenyeerra," jechuun BBCtti himteetti.
"Jimaata ture kanan as ga'e. Sana booda gara Dajanitti deebine. Har'adha kan deebinee imala eeggalle," jetti.
Imaaltoonni ishee waliin turan hedduun barroota ta'uu kan dubbattu Tigist kaleessa gara Dajanitti deebi'anii buluuf akka dirqaman dubbatti.
Imaltoota gara Dajanitti deebi'ani hunda kan keessumeessu manni ciisichaa wanta hin turreef, namootni hedduun manneen amantaa, mana namaafi bakkeerra buluu isaani Tigist ni dubbatti.
"Si'a tokko konkolaataa irraa buunee sakkatta'amneerra. Daandiin nagaadha," jechuun haala guyyaa har'a dubbatti.
"Daandii Abbaay Baraha irra konkolaattoonni hedduun wal darbuu waan hin dandeenyeef jalqaba warra achi dhaabbatanii turan dabarsuun tiraafikaa cufamee ture hambisneerra," jechuun hogganaan bulchiinsafi nageenya Godina Dajan Obbo Kaasaahuun dubbataniiru.
Naannoo Oromiyaatti hogganaa waajjira nageenyaa Godina Shawaa Kaabaa kan ta'an Obbo Lammaa Hordofaa garuu durumaan daandiichi hin cufamne jedhu. Kaleessa Sanbata konkolaattonni nagaan akka darbaa turanidha odeeffannoo ani qabu jechuun BBCtti himanii turan.
Har'a Dilbata ganamas "Daandichi durumaanu hin cufamne. Kunoo amma magaalaa Ficheen jira, konkolaatoonni darbaa jiru" jechuun BBCtti himaniiru.
Harargee Lixaa Aanaa Gumbii Bordoddeetti namoonni 7 hidhattootaan ajjeefaman